ထွန်းအိန္ဒြာဗို အမေရိကန်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်နဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စ ဆိုပဲ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ထွန်းအိန္ဒြာဗို အမေရိကန်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်နဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စ ဆိုပဲ….
ထွန်းအိန္ဒြာဗို အမေရိကန်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်နဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စ ဆိုပဲ….
Posted by kai on Feb 8, 2010 in Entertainment, Legal Information/Visa, News | 1 comment
Copyright Htun Eaindra Bo Music patent video
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်နေ့ထုတ်အလင်းတန်း ဂျာနယ်(အမှတ်၅၉၂)မှာပါတာပါ။
အလင်းတန်းဂျာနယ်တခုလုံးကိုတော့ အောက်ကလင့်ခ် ကနေ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာ အားရပါးရ ခိုးကူးရောင်းနေတဲ့ အခွေကို မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စလို့ ပြောလာကြတော့….။
အဲဒီအခွေမှာ စပွန်ဆာအနေနဲ့နာမည်ပါနေတဲ့ တခုတည်းသော မီဒီယာ(မန္တလေးဂေဇက်)အနေနဲ့ ပြန်ပြောချင်တာက…
…..မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ အခွေထွက်နေပြီး မြန်မာပြည်က သီချင်းချစ်သူ သိန်းသန်း အားပေးနေတာကို သိတောင်မသိကြရှာတဲ့….သီချင်းတွေရဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်( သီချင်းရှင်)(တွေ)ကို ကြင်နာပါ လို့ ပါပဲ…။
နောက်နောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ မြန်မာပြည် ဆက်ဆံရေးကောင်း..ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ဒီလို မူပိုင်ခွင့်၊ကော်ပီရိုက်။ လိုင်စင်။ ကိစ္စတွေ သေသေချာချာ သတိထားကြရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်းလေးလည်း…ထပ်ဆင့်ပြောထားပါရစေ။
အဲဒါအမှန်ပဲ ။ သူများသီချင်းတွေကိုအပီအပြင်ကူးချပြီးစီးပွားတွေအတော်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ မြန်မာပြည်ကအဆိုတော်အတော်များများပါ။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ကိုယ်ပိုင်စာသားနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူ အောင်မြင်လာသူအဆိုတော်တွေဆိုတာလက်ချိူးေ၇လို့ ရပါတယ် ကိုယ်ပာာကိုယ်ေ၇းလာကြတဲ့သီချင်းတွေမှာလည်း စာသား စကားလုံးသုံးစွဲမှူတွေပာာ တနေ့ တခြားကြမ်းတမ်းလာတာကို လည်းတွေ့ မြင်ကြားသိနေရပါတယ်။ သူများသီချင်းတွေတော့အားရပါးရခိုးပြီး ကိုယ့်သီချင်းကျမှ မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကတော့နော …အင်း ကမ္ဘာရွာကြီးမှာနော် ရွာတောင်ထိပ်က သတင်းက လေတစ်ချက်တောင်မတိုက်ရသေးဘူး ရွာမြောက်က သိပြီးနေကြပြီ။ သတင်းဆိုတာအဲလိုကိုမြန်နေတာ မတော် မူရင်းသီချင်းပိုင်ရှင်တွေသိပြီး သူတို့ အချင်းချင်းလက်တို့ ပြီး မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ လိုက်လာကာမှ ပြသနာတက်ကုန်မယ်၊ အမြတ်ခွန်ကမှညှိလို့ ရသေးတယ် နိုင်ငံခြားကအဆိုတော်တွေက ညှိလို့ ရလောက်ဘူးတော့်